नाकाबन्दीका सुत्रधार भारतीय जासुस मोदीसँगै ! - Kendrabindu Nepal Online News
नाकाबन्दीका सुत्रधार भारतीय जासुस मोदीसँगै !
२९ बैशाख २०७५, शनिबार ०७:०६
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २ दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालमा नाकाबन्दी लगाउने सुत्रधार एबम मोदीका प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल जनकपुरमा ओर्लिए । मोदी सवार एटिआर ७२–६०० विमानबाट सबैभन्दा पहिला ओर्लिएका डोभल त्यसपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा भने देखिएनन् ।
डोभलको विश्लेषणमा २०७२ असोजमा भारतले नेपाल माथि अमानवीय नाकाबन्दी लगाएको थियो । मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार समेत रहेका डोभल भ्रमण टोलीका एक महत्वपूर्ण सदस्य हुन् । ४० वर्षभन्दा बढी भारतीय सुरक्षा एजेन्सीहरुमा काम गरेका डोभल भारतमा सिक्किम मिसाउने योजनाकार मानिन्छन् ।
डोभलको जानकारी डिप्लोमेसी र वैदेशिक सम्बन्धबारे कम रहेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । हाइप्रोफाइल भारतीय जासुसका रुपमा चिनिएका डोभल सात वर्ष सम्म पाकिस्तानमा मुस्लिमको भेषमा रहेर सूचना बटुल्ने काममा सक्रिय रहेका थिए ।
Prevउपत्यका भित्रै तरकारीको फरक फरक मूल्यः मूल्य निर्धारणमा विक्रेताकै मनोमानी
कसरी मिल्न गयो मोदी र ओलीको ड्रेस ? यस्तो छ रहस्य !Next